Izihloko ezi-5 zeendaba zoncwadi zamva nje zonyaka | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Iincwadi, Inoveli
Uphelile unyaka kwaye lixesha lokubala kunye nokulinganisa iincwadi kunye nokufundwa, kodwa kusekho ezinye izihloko ezitsha kule nyanga iphelileyo. Ezabantwana, iinoveli, ezakudala ... Basaza kuza okanye ngoku babona ukukhanya okokuqala. Makhe sibone ukuba zeziphi ezi zinto cinco ukuba ndinguye.
1 Bonke Ubomi Bam ObuNcinci - uGrace Klimt
2 UMoya weKrisimesi-UGilbert K. Chesterton
3 Vumela inenekazi lam likuxelele-uCarmen Morillo Martín
4 Ubukhosi beJazz -Andrea P. Muñoz
5 Iindlela ezinqamlezileyo-iPaco Roca kunye noKhuseleko lweNtlalo
Bonke ubomi bam obuncinci -Ubabalo uKlimt
Incwadi yokuqala yombhali uRuth Rozados Velado otyikitya njengoGrace Klimt. Yaziswa ngo-Epreli 2017, ngoku ibona ukukhanya okutsha ephepheni kuyilo olusikiweyo, into emangazayo kunenye ngaphakathi nangaphezulu kwintsebenziswano.
Isixelela ibali lomfazi owathi, nangona uphawu lweempawu zakhe zomzimba bubude obufutshane, waba ngabo bonke abantu basetyhini emhlabeni. Yonke imihla ithatha uhlobo lwayo inamagama abalulekileyo kuncwadi njenge UVirginia Woolf, uMarguerite Duras okanye uSimone de Beauvoir. Kodwa uthetha ngelizwi likaHedy Lamarr kwaye uphela njengoGrace Klimt ukusixelela okwenzekileyo kwabanye ubomi babo phakathi evekini.
Umoya weKrismesi -Gilbert K. Chesterton
UGilbert Keith Chesterton (London, 1874-Beaconsfield, 1936) waziwa kwihlabathi ngu amabali akhe omcuphi kaTata uBrown okanye kwinoveli yakhe Indoda ebinguLwesine. Nangona kunjalo, lo mbhali oliNgesi ugqwesile kuzo zonke iintlobo Uncwadi, ngakumbi kwizinto ezingaqhelekanga njengoko kunjalo assayo. Oku, kwimeko yakhe, kuthetha ukuthetha ngobuntatheli. UChesterton wayengu intatheli ihlala ilungele uphando kunye nengxoxo kuwo nawuphi na umbandela kwaye akazange oyike ukuphikisana.
Kule ncwadi Chesterton, nangomzimba wakhe omkhulu, kuvusa umfanekiso kaSanta Claus, nakwingqondo nangokweemvakalelo. Wayesoloko engummeli onomdla weKrisimesi, awayebhala ngawo amanqaku kunye nezincoko, amabali amafutshane kunye nemibongo, kunye nomdlalo omfutshane. Ke olu qokelelo, luphelele kwaye lubanzi ukuba eyapapashwa ngo-1984 kwaye ngoku epapashwa okokuqala eSpain, ingaphezulu kokufunda ngokwaneleyo kwimihla ezayo. Kwaye akuyomfuneko nokuba ukholo okanye inkolo ukuba lusondele kuye ngomnqweno ofanayo nowaseChesterton.
Makhe ndikuxelele -Carmen Morillo Martín
UCarmen Morillo (ngo-1964) ngu BA ngesiNgesi Philology yi-UPV nakwinzululwazi yezopolitiko nguUNED. Ngoku usebenza njengomfundisi-ntsapho wesiNgesi, ubhalile Iinoveli zabantwana ababini kwaye ukwinkqubo yomntu ngamnye kubo bonke abaphulaphuli. Uhlala eAmurrio nomyeni wakhe, abantwana bakhe ababini nenja yakhe.
Kwaye kuyinto encinci kwimbono yenja eli bali eliyasixelela ngayo Xena. Usixelela ngayo yonke into eyenzekayo kusapho lakwaReverte, esongeza uburharha kunye nenqaku elingakumbi lenkcubeko. Yi Inja enenkcubeko kwaye ihambisa lonke ulwazi kuthi ngeencoko kunye nesinye isilwanyana esihlala endlwini, ikati ilula kancinci.
Ukungaqondani kunye neempikiswano eziphakathi kwezi zilwanyana zibini ziyinto ehlekisayo kwaye zisenza sicingisise ngokubalulekileyo ebomini. Iikhonsepthi ezinje ngexabiso lomntu okanye ukuzithemba, esisiseko sokulingana ngokweemvakalelo, zeza kuthi ngeXena ngendlela emnandi kakhulu. Kwaye kusibeka kwiimeko zokusombulula ngeyona ndlela ilungileyo kunye nokusebenzisa okuhle okusenza sibe ngabantu abangcono.
Ubukhosi beJazz -U-Andrea P. Muñoz
Lo mbhali mncinci wazalelwa eAlicante ngo1993. Wafunda Ubugcisa beDrama Phambi kokufumana ubizo lokwenyani kwaye ngo-2016 waphumelela izifundo zakhe Ubugcisa bobuchwephesha kunye nokuchazwa kweempawu ezizodwa. Kwimibhalo yakhe yokuqala, wahlakulela imfesane ngakumbi kunye nokuthandana ngokuthandana, kodwa ungumfundi onomdla wenoveli zolwaphulo-mthetho. Umsebenzi wakhe wokuqala opapashiweyo wawungu Ntombi yookumkani Kwaye ngoku kuza nale Ubukhosi beJazz.
Sikwi yamashumi amabini, ixesha eligcwele ligazi, ubuhle kunye nemfihlakalo ejikeleze umculo wejazz. Baninzi abalinganiswa, abafana UEthan, ofuna ukubuyisa udadewabo Sophia, unyanzelwe ukuba atshate engafuni. OKANYE Jack, ofuna ukushiya ngasemva idlulileyo kwaye abe yindoda elungileyo ayaziyo ukuba inguye. OKANYE Dalia, Inkwenkwezi enobomi obuxakekileyo. Y Maggie, isicakakazi esinobomi obungabangeli mdla.
Nganye amabali abo ahambelana kule Jazz Empire Hotel, apho zinqumla khona ngesiphelo esiyingozi, nangona kunjalo, sinonxibelelwano. Xa i ulwaphulo-mthetho kwaye umbulali uzimele emva kweendonga zehotele ukuze aqhubeke nokubulala, bonke baya kubanjiswa kwisigcawu sewebhu semfihlakalo.
Indlela enqamlezayo -Paco Roca kunye noKhuseleko lweNtlalo
Kuthathelwa ingqalelo njenge idiski yencwadi okanye idiski ehlekisayo, kuba ibandakanya icwecwe elinegama elingelilo elikhutshiwe ngu Khu seleko loLuntu, esi sihloko siyimveliso yentsebenziswano phakathi UPaco Roca noJosé Manuel Casañ, inkokeli yeqela loKhuseleko lweNtlalo. Yenziwe Ama-150 amaphepha ahlekisayo kunye neengoma ezili-11.
IValencian Paco Roca Ungoyena mdwebi weekhathuni ubalulekileyo kule minyaka idlulileyo kwaye nganye yemisebenzi yakhe ibe sisiqinisekiso somgangatho kunye nempumelelo ngezihloko ezinje Imibimbi, El Faro, IGrooves yeThuba, Umdlalo omdaka, Ekhaya Ubusika bekhathuni o Ukuvuma kwendoda enxibe iipyjama. Umdla wakhe kwihlabathi lomculo wamkhokelela ekubeni athethe ngawo, inkqubo yokudala, intengiso yerekhodi okanye indalo ye-comics kunye nemvumi evela kuKhuseleko lweNtlalo. Ezi iincoko iminyaka emine enesiqingatha zifakiwe kwii-vignettes zale ncwadi ezipapashayo Iintlelo ze-Astiberri kwingqokelela yakho Isihlalo sendlebe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Izihloko ezi-5 zeendaba zoncwadi zamva nje zalo nyaka